कसरी एप्पल संगीत पूरा गर्न को लागी पूर्ण | आईफोन समाचार
एप्पल संगीत एक महीना भन्दा बढि हामीसंग छ र हामीले सेवाको कार्य कसरी गर्ने जान्न हामीले यसलाई पहिले नै परीक्षण गरिसकेका छौं। यस लेखमा हामी व्याख्या गर्न कोशिस गर्नेछौं कसरी सबै भन्दा आधारभूत चीजहरू गर्ने, कसरी परीक्षण अवधिको मजा लिन सुरु गर्न बाट संगीत डाउनलोड गर्न यो अफलाइन सुन्न। यो मलाई एकदम सहज लाग्न सक्छ, तर म सचेत छु कि यो सबैको लागि छैन र त्यसैले हामीले यो गाइड सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका छौं।
1 नि: शुल्क परीक्षण अवधिको मजा कसरी लिने
2 हाम्रो प्राथमिकता अनुसार संगीत कसरी पत्ता लगाउने
3 कसरी कनेक्ट काम गर्दछ
4 प्लेलिस्टहरू कसरी सिर्जना गर्ने
5 कसरी एक एप्पल संगीत प्लेलिस्ट साझा गर्ने
6 अफलाइन प्लेब्याकको लागि संगीत कसरी डाउनलोड गर्ने
नि: शुल्क परीक्षण अवधिको मजा कसरी लिने
पुनर्स्थापना पछि हामी पहिलो पटक संगीत अनुप्रयोग चलाउँछौं, हामी एप्पल संगीतको सदस्यता लिन विकल्प देख्नेछौं। सदस्यता लिन हामीले भर्खरै रातो बटनमा ट्याप गर्नुपर्दछ जुन says--महिना नि: शुल्क परीक्षण अवधि। र, अर्को स्क्रिनमा, हाम्रो योजना छनौट गर्नुहोस्यदि हामी व्यक्ति € € .9,99 / / महिनाको लागि चाहन्छौं वा परिवार १ one... / महिनाको लागि, यदि तपाइँ छविहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ (तिनीहरू आईप्याडको दुई क्याप्चर हुन्, अलमल्ल नहुनुहोस्)। हामी "खरीद" पुष्टि गर्छौं र हामीसँग यो छ। पप-अप विन्डोमा, यसले हामीलाई भन्छ कि हामीले छनौट गरेको रकम लिने छ, तर त्यो हाम्रो परीक्षण अवधि समाप्त हुने समयमा हुनेछ।
यदि तपाईंले सदस्यता बिना म्युजिक अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सुरू गर्नुभयो भने, तपाईंलाई देखिनको लागि सब भन्दा चाँडो र सजिलो विकल्प छ बासको मुटुमा खेल्नुहोस्। यो "तपाईंको लागि" सेक्सन हो र यो सदस्यतासँग मात्र उपलब्ध हुनेछ, त्यसैले सदस्यता लिन विकल्प देखा पर्नेछ जुन त्यस सेक्सनको पहुँच गर्ने प्रयास गर्दा।
तपाईंले खातामा लिनु पर्दछ कि तिनीहरूले हाम्रो सेवा अवधि समाप्त भएपछि स्वचालित रूपमा हामीलाई सेवा चार्ज गर्न थाल्नेछ। यदि हामी यसलाई स्वचालित रूपमा नवीकरण गर्न चाहँदैनौं भने तपाईंले हाम्रो ट्यूटोरियल अनुसरण गर्नुपर्छ एप्पल संगीतको स्वचालित नवीकरण निष्क्रिय गर्नुहोस् र एक डराउँनुहोस्.
हाम्रो प्राथमिकता अनुसार संगीत कसरी पत्ता लगाउने
एप्पल संगीतको एक उत्तम सुविधाहरू "तपाईंको लागि" सेक्सन हो। यो एक ट्याब हो जसमा हामीलाई चासो लाग्ने समूहहरू देखा पर्नेछन् र वास्तवमा यो एकदम सटीक हो, यद्यपि यो पनि सत्य हो कि केही समूह वा कलाकार यसमा चुटकुले लायक बनाउन योग्य छन्, तर हे। तिनीहरू थोरै छन्। You तपाइँको लागि us हामीलाई कलाकारहरूको सुझाव दिनको लागि आदेशमा हामीले यत्ति धेरै जानकारी प्रस्ताव गर्न सक्दछौं। एक सुरुवातको लागि हामीले मनपर्ने संगीत शैलीहरू छनौट गर्नुपर्नेछ र, कलाकारहरू जसले हामीलाई प्रस्ताव गर्छन्, एक छनौट गर्नुहोस् जुन हामीलाई सबैभन्दा मनपर्दछ। यसको लागि हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं:
हामीले यसमा खेलेका थियौं हेड आइकन.
हामी मा खेले तपाइँको कलाकार छान्नुहोस्.
हामी आफैले मन पराउने शैलीहरू छनौट गर्छौं अर्को.
हामीलाई प्रस्ताव गर्ने कलाकारहरू मध्ये, हामी आफुले मनपर्ने र खेल्नेलाई छनौट गर्दछौं स्वीकार.
बबल प्रणालीसँग साधारण अपरेसन छ, तर यो जान्नु आवश्यक छ। हामीसँग options विकल्पहरू छन्:
यदि हामी एक पटक बबलमा छुन्छौं भने, हामी यसलाई हाम्रो मनपर्ने मार्क गर्दछौं। हामी हेर्छौं कि यो अलि ठुलो भयो।
यदि हामी बबलमा डबल ट्याप गर्‍यौं, हामी यसलाई मनपर्नेको रूपमा चिनो लगाउँदछौं। यो अझ ठूलो हुन्छ।
यदि उसले हामीलाई केहि प्रस्ताव गर्छ जुन हामीलाई मनपर्दैन, हामी एक बबललाई छुन्छौं र यसलाई हटाउनका लागि समात्छौं। हामी हेर्नेछौं कि काउन्टडाउन देखा पर्नेछ।
साथै, मैले पहिले भनेझैं हामीले तपाईंलाई थप जानकारी दिन आवश्यक छ। यो गर्न हामीले हृदयलाई छुनु पर्छ जुन हाम्रो मनपर्ने गीतहरू, कलाकारहरू, रेकर्डहरू, आदि पछाडि देखा पर्दछ। यदि हामी मुटु देख्दैनौं, जसरी डिस्कहरूमा हुन्छ, हामीले points बिन्दुहरूमा छुनु पर्छ ताकि हामीलाई विकल्पहरू देखाइनेछ, जस मध्ये हामी डिस्कलाई हामी चाहेको जस्तो मार्क गर्न सक्षम हुनेछौं। अर्को तीनको अन्तिम स्क्रिनशट हेर्नको लागि, हामीले मिनी प्लेयरलाई स्लाइड गर्नुपर्नेछ।
कसरी कनेक्ट काम गर्दछ
म साँच्चिकै मनपर्दछु भन्ने एक राम्रो विचार हो, तर एकै साथ मलाई डर लाग्छ कि यसले काम गर्दैन र मलाई लाग्छ कि यो सुधार गर्न सकिन्छ, कनेक्ट हो। हामी जीवनको पहिलो हप्तामा छौं र म विश्वास गर्दछु र आशा गर्दछु कि उनीहरूले भविष्यमा नयाँ सुविधाहरू थप्नेछन्। उदाहरण को लागी, सूचनाहरु वा सूचनाहरु को लागी जब हाम्रो पुस्तकालय मा एक कलाकार एक नया काम को रिलीज, केहि केहि मैले अभी पनी तेर्सो-पार्टी अनुप्रयोगहरु संग।
जे भए पनि, हाल कनेक्ट कलाकारहरूको लागि फेसबुक वा ट्विटरको एक प्रकार हो। कलाकारहरूले भिडियोहरू, गीतहरू, फोटोहरू, र अरू केहि सोच्न पोस्ट गर्न सक्दछन्। यसको प्रयोग सुरू गर्न तपाईसँग कनेक्ट प्रोफाइल हुनुपर्दछ। यो प्राप्त गर्नका लागि, हामीले केवल हेड आइकनमा जानुपर्नेछ (तपाईं यसलाई संगीतमा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने खण्डमा देख्न सक्नुहुन्छ) र प्रोफाइल सिर्जना गर्नुहोस्। एक पटक प्रोफाइल सिर्जना भए पछि, हामी कलाकारहरूलाई पछ्याउन सक्छौं र, कनेक्ट ट्याबमा, तिनीहरूका सबै प्रकाशनहरू हेर्नुहोस्, ट्विटरमा जस्तै।
यदि कलाकारको कनेक्टमा एक सक्रिय प्रोफाइल छ भने, हामी एउटा खोजी गर्न सक्दछौं, कलाकारको पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुहोस् र उसको पृष्ठबाट उसका प्रकाशनहरू देख्न सक्नुहुनेछ, तर यदि हामीले उहाँलाई पछ्याइरहेका छौं भने यो आवश्यक हुनेछैन किनकि हामीले उहाँलाई हाम्रो «भित्ता on मा हेर्नेछौं, त्यसोभए कुरा गर्न केवल फेसबुक वा ट्विटरमा। हामी कलाकारले थपेको सामग्रीसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्छौं, तर न्यूनतम। वर्तमानमा हामी तपाईको पोष्टहरूमा मनपरी टिप्पणी गर्न र साझेदारी गर्न सक्दछौं।
प्लेलिस्टहरू कसरी सिर्जना गर्ने
प्लेलिस्ट सिर्जना गर्न धेरै सरल छ, तर यदि तपाईं पाठ सानो हुनुभएन भने ध्यान दिएन भने यो उपेक्षा गर्न सकिन्छ। एउटा सूची सिर्जना गर्न हामीले निम्न गर्नुपर्नेछ:
हामी ट्याबमा छुन्छौं मेरो संगीत। यदि हामी हाम्रो पुस्तकालयमा छौं भने हामी हाम्रा सूचिहरू हेर्न बायाँ स्वाइप गर्दछौं।
हामी मा खेले नयाँ.
Le हामीले एउटा शीर्षक राख्यौं.
Le हामी एक फोटो जोड्दछौं (वैकल्पिक)। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, सूचीले हामीले थपेको फोटोको र adop्गहरू अपनाउनेछ।
हामी गीतहरू थप्दछौं हाम्रो पुस्तकालय बाट
हामी मा खेले OK.
यदि हामी हाम्रो लाइब्रेरीमा नभएको गीतहरू थप्दछौं भने, ती हामीलाई थपिनेछन्। यदि हामीले तिनीहरूलाई हाम्रो लाइब्रेरीबाट हटायौं भने, तिनीहरूले हामीलाई हाम्रो सूचीबाट हटाउनेछन्, जुन मलाई मनपर्दैन। यो भनिन्छ र केहि हुँदैन।
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्ना सम्पर्कहरू सुन्नको लागि तपाईंको सूचीहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ, जसरी मैले सूचीसँग गरेँ धातु आज। मेरो केसमा, मैले लिंक प्रतिलिपि गरेर टाँसेर गरें, तर यो ट्विटर, मेल, व्हाट्सएप, आदि द्वारा पनि साझेदारी गर्न सकिन्छ। सूची साझेदारी गर्न हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं।
हामीले यसमा खेलेका थियौं3बिन्दुहरू सूचीको दायाँ तिर। यदि हामीसँग सूची छ भने, हामीले सेयर बटनमा ट्याप गर्नुपर्दछ (
हामी मा खेले सूची साझेदारी गर्नुहोस् ...
हामीले विकल्प रोज्यौं साझा र पठाउन।
अफलाइन प्लेब्याकको लागि संगीत कसरी डाउनलोड गर्ने
एप्पल संगीतले हामीलाई अफ-लाइन सुन्न संगीत डाउनलोड गर्न पनि अनुमति दिन्छ, यो यस्तो चीज हो जुन पहिले विश्वास गरिन्छ कि यो सम्भव छैन तर भाग्यवस, यो हो। निश्चित रूपमा यदि तपाईंले यस लेखको आधा हेराइमा हेर्नु भएको छ भने, तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि कसरी यसलाई कम वा कम पाउने हो। ठ्याक्कै। यो तीन थोप्लोसँग गर्नु पर्छ। यसलाई अफलाइन सुन्न संगीत डाउनलोड गर्न हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं।
हामी हाम्रो रुचि केहि को लागी खोजी गर्दैछौं।
हामीले यसमा खेलेका थियौं तीन पोइन्ट जुन हामी दायाँ पट्टि देख्छौं।
हामी मा खेले अफलाइन उपलब्ध.
समाप्त गर्नका लागि, म तपाईंलाई तीनवटा साना सुझावहरू भन्न चाहन्छु कि निश्चित रूपले तपाईं मध्ये धेरैले सोचेका छैनन् कि अब उपलब्ध छैनन्:
स्टार रेटिंग्स अझै उपलब्ध छन्। यो गर्नका लागि तपाईले केवल गीतको नाम माथि छुनु पर्छ र points पोइन्ट देखा पर्नेछ (· · · · ·) जसमा हामी ताराहरू थप्न सक्छौं।
एल्बम सफा उपलब्ध छ। डिस्क अनियमित रूपमा खेल्नको लागि हामीले एउटा डिस्क खोल्नु पर्छ, मिनी-प्लेयर विस्तार गर्नुहोस् र त्यहाँ हामी विकल्प देख्नेछौं।
हामी गीतहरूको बोलहरू देख्न सक्छौं (यदि हामीले आईट्यून्समा उनीहरूको मेटाडाटामा थपेका छौं) मात्र एल्बम कभर छोएर।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी एप्पल संगीत पूर्ण गर्न को लागी
ठीक छ, २ दिनको लागि मैले I महिना नि: शुल्क परीक्षण प्रयोग गर्ने निर्णय गरें। मैले भन्न खोजेको कि यसको धेरै धेरै क्षमताहरू भए पनि, मैले स्पोटिफाइसँग बढी सहज महसुस गरें, एप्लिकेसन (मेरो लागि) धेरै सहज छ, यसले उनीहरूले लामो समयदेखि बजारमा गरेको देखाउँदछ, म आशा गर्दछु एप्पल म्युजिकले लिन्छ। नोट गर्नुहोस् र iOS iOS .० मा संगीत अनुप्रयोगमा सुधार गर्नुहोस् बीटा परीक्षकहरू फोरममा स्टेट गर्दै छन्। निश्चित रूपमा परीक्षण अवधि पछि म €2को सदस्यता लिन्छु
नमस्ते जोर्डी। आज दिउँसो मैले यसमा ट्वीटरमा साथीको साथ टिप्पणी गरेको छु। एप्पल संगीत उत्तम हुनेछ यदि तपाईंसँग सबै एप्पलबाट आएको छ (वा तपाईंसँग आईट्यून्सको साथ पीसी छ) र तपाईं सदस्यता लिने योजना बनाउनुहुन्छ। यदि तपाइँ अधिक उपकरणहरू, जस्तै लिनक्स पीसी, PS3, आदि प्रयोग गर्नुहुन्छ वा यदि तपाइँ नि: शुल्क सेवा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, एप्पल संगीत वास्तवमा प्रख्यात इमोजी जस्तै हो जुन खैरो, त्रिकोणको आकारको र आखाका साथ आकारको हुन्छ।
रोजिलियो रजो स्टिन भन्यो
तपाईंले गीतहरूको श्रृ the्खला थप्न आवश्यक छ
Rogelio Razo Stein लाई जवाफ दिनुहोस्
Pablooooo, उहाँ यहाँबाट हुनुहुन्न वा राम्रोसँग उनीसँग अंश छ ...
कुन मेटल गीतहरू तपाईले सिफारिश गर्नुहुन्छ वा कुन समूहहरू (म यसलाई सुन्न सुरू गर्दैछु) र म तपाईको राय र अनुभव चाहन्छु
यस लेखको लागि बधाई र धन्यवाद पाब्लो यद्यपि मेरो लागि ... म यसको लाभ लिने छैन (म संगीत धेरै सुन्दैन)
नमस्कार राफेल। शायद भारी धातु तपाईलाई धेरै पुरानो देखिन्छ। भारी धातुबाट तपाईसँग आइरन मेडन र मानोवर छ, उदाहरणका लागि। हुनसक्छ तपाई पावरमेटल मन पराउनुहुन्छ। तपाईं हेलोवीन, ब्लाइन्ड गार्जियन वा ड्र्यागनफोर्सको प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको सोच्नका लागि। धेरै शैलीहरू मिलाउने समूह अमरन्थे हो र ती धेरै आधुनिक छन्, उनीहरूले २०११ मा आफ्नो पहिलो एल्बम निकाले।
यदि पावर मेटल तपाईंलाई अल्छी लाग्छ भने, तब तपाईं स्पीड मेटलमा जान सक्नुहुन्छ, तर म तपाईंलाई कसरी यो समूह चलाउने समूहहरू बताउने छैन। मेटलिका र मेगादेत, जुन सामान्य नियमको रूपमा थ्र्याश मेटल हुन्, पनि केहि भन्दा बढि स्पीड मेटल एल्बम छ।
पाब्लो मँ तपाईंलाई पनामा बाट लेख्दै छु, र मेरो लागि सब भन्दा ठूलो असुविधामध्ये एक हो मैले मेरो स्पोटिफ प्लेलिस्टहरू पास गर्दा, मैले भेट्टा कि केही गीतहरू वा एल्बमहरू मेरो क्षेत्रमा उपलब्ध छैनन्। र मैले पढेको जस्तै, संगीत क्याटलगहरू यसै जस्तै छन् (क्षेत्र द्वारा)। मैले एप्पल म्यूजिकलाई एक मौका दिने प्रयास गरें र सत्य यो हो कि म स्पोटिफलाई रुचाउँछु। हुनसक्छ अर्को समय।
धन्यवाद पाब्लो, अभिवादन
म २ बर्ष भन्दा बढि लागी एक Spotif प्रयोगकर्ता भएको छु। र म म्याक, आईफोन र PS2 प्रयोगकर्ता पनि हुँ। मसँग केवल एउटा कारण छ किन म एप्पल संगीतसँग टाँसिन सक्दिन, धेरै उपकरणहरूमा समान खाता छैन। स्पोटिफाई प्रिमियमको साथ (ist 4। Mov Mov मोभिसारबाटबाट आएको) म मेरो प्रयोगकर्तालाई बिभिन्न उपकरणहरूमा राख्न सक्दछु र अफलाइन मोड विकल्प सक्रिय गर्न सक्दछु। यो विकल्प मेरो आईफोन, मेरो पार्टनरको आईफोन र आईप्याड, र मेरो बुबाको एन्ड्रोइड फोनमा मेरो खाता प्रयोग गर्न धेरै उपयोगी छ। एप्पल संगीत संग म यो विकल्प हुन सक्दैन, मेरो लागि आवश्यक।
यदि मैले--महिना नि: शुल्क परीक्षण पहुँच गरेको छु र मलाई यो सेवा मनपर्दैन। सदस्यता रद्द कसरी गरिन्छ? धन्यवाद पाब्लो।
जुआन्चोलाई जवाफ दिनुहोस्।
नमस्कार, जुआन्चो। यदि तपाइँ एक सेवा को लागी भुक्तान, तपाइँ सेवा राख्नु पर्छ। मेरो मतलब यो रद्द गर्न सकिदैन। तपाइँले के गर्नु पर्छ सदस्यता स्वचालित रूपमा नवीकरण हुनबाट रोक्नु हो। तपाईंसँग यस लेखमा ट्यूटोरियलको लिंक छ। जब तपाईं यसलाई निस्क्रिय गर्नुहुन्छ र मिति बित्छ, तपाईं अब सदस्यता लिनुहुनेछ।
तपाइँले यो लेख मा के भन्छ गर्न पर्छ https://www.actualidadiphone.com/desactiva-la-renovacion-automatica-de-apple-music-y-no-te-lleves-un-susto/
सेटिंग्स / संगीत बाट तपाई आईक्लाउड लाईब्रेरी निस्क्रिय गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले गीतहरू, एल्बमहरू र सम्पूर्ण एप्पल म्यूजिक क्याटलगलाई सुन्न सक्नुहुनेछ म तपाईं लाई राखेको मिति सम्म। जब त्यो मिति आउँछ, तपाईंको सदस्यता समाप्त हुनेछ र तपाईंलाई चार्ज गरिने छैन।
एप्पलले आईओएस bet बिटा develop विकासकर्ता र सार्वजनिक बिटा for को लागि जारी गर्दछ। हामी तपाइँलाई यसको सबै समाचार बताउँछौं।